Sida loo dayactir ah Slide Water buufin: The Afar Dhibaatooyinka Inta badan Common - Shiinaha Shanghai Mutong
Sida loo dayactir ah Slide Water buufin: Dhibaatooyinka Common Afar intooda badan ayaa
Carruurta oo kedis ah qaab-dhismeedka
bogagga biyo la buufin ayaa noqotay mid aad loo jecel yahay iyo haddii aad nasiib waa ku filan si ay leedahay mid ka mid ah aad ogaato sababta. Waxaad u timaadeen inaad goobta saxda haddii aad raadinayso info ku saabsan sida loo hagaajin ah slide biyo la buufin. Banzai Falls dhacdo in mid ka mid ah noocyada ugu badan loo aqoonsan la heli karo iyo mid ka mid ah iibinta ugu fiican. Nasiib darro waxa kale oo ay u muuqdaan in ay noqon mid ka mid ah bogagga ugu dhibaato aad u.
Waxaa jira qaar ka mid ah dayactir ay fududdahay in la xaliyo iyo qaar ka mid ah in ay yihiin shishadiisa ku rajaynaynay oo dhan. Waxaan u tegayaa inaan ku daboolaan afar dhibaatooyinka ugu badan iyo sida aad naftaada qaadan kartaa daryeelka iyaga iyo waxa ay u badan tahay in uu yahay mid ka mid ah caruurta aad alaabta lagu jecel yahay badbaadin.
1. Qaab: Well xagaaga halkan mar kale waa iyo in maalinta kowaad kulul caruurta aad tuugsanaysa slide biyo ah oo aad u ka soo fagid ka kaydinta iyo u arkaan in ay wax walba ka caaryaysatay. Caaryada waa coroge iyo wuxuu noqon karaa halis caafimaad suurto gal ah laakiin mararka qaarkood haddii aanay aad u ballaaran aad uga takhalusi karaa waxaa ka mid ah. Ku bilow by helitaanka il a in uu yahay mid ammaan u ah shiraac caag Waxaan kula talin lahaa Aurora Doon Nadiifi Plus. Laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan maydhayeen aad buufin sanadkiiba hal mar si ay u caawiyaan sii waa daahir.
2. Tear ama Puncture in Fabric ah: No arrinta sida taxadir inaad tahay buufin slide biyojeexitaan ama dalool dhici kartaa. Ma laga yaabaa in aad u aragto ilaa aad ka badbadinin ku slide iyo ogeysiis waa ka yar yahay buunbuuniyo ama aan la buunbuuniyo oo dhan. Haddii ay taasi dhacdo waa in aad bilowdo in ay soo ugaarsadaan jeex ee dhar ah.
Haddii slide aan ka badbadinin doono oo dhan dhaawaca waxaa laga yaabaa ballaaran ku filan in aad si fudud u heli karaan. Haddii slide wax yar oo kaliya ka yar badbadiyay waxa laga yaabaa inay ka dhigan tahay in jeex uu yahay mid yar oo laga yaabaa in ay adag tahay in la helo. trick A si ay u sameeyaan this sahlan waa in ay ka badbadinin slide oo ugu tuujisid dhalo buufiyo la isku dar ah ee saabuunta weelka oo biyo ka soo buuxisay ah. Haddii aad qabto wax dillaac ah hawada looga baxsan karo waa keeni isku dar ah in xumbo iyo aqoonsan kartaa halka uu dhibaatadaada. Marka aad ka heli dillaac ah waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si loo hubiyo inta kale ee slide si loo hubiyo in ay jirto ma aha in ka badan hal.
Si ay u cusboonaysiiyaan jeexid ama jeex in dhar aad bilowdo by tolidda ilaa godka waa in looga hortago ka sii weyn. Marka aad u tolaa kor waxaad u baahan doontaa qaar ka mid ah koolo iyo goosin ka mid ah wax for karriin. Waxaad ka iibsan kartaa qalabka dayactirka shiraac ah oo ka meel kasta oo iibisa qalabka safarada baadiyaha waa in ay iyaga leeyihiin, waayo, dayactirka teendhooyinkoodii.
Raac tilmaamaha in la timid kit oo kaliya in aad isticmaasho balastar weyn oo ku filan si ay u daboosho rip oo dhan ka dhigi. Haddii qalabka balastar ma ku filan oo aad isticmaali karto in ka badan hal xabbad oo keliya hubi in aad daboolaa tolay by qiyaastii 1 inch.
3. qaybsama galaan: Nasiib darro, haddii aad slide waxaa soo socda marka laga reebo at tolay aad qabto nooca ugu adag ee dayactirka in la sameeyo. Inta badan noocan ah ee dhaawaca waxaa laga yaabaa in aad u ballaaran si uu u xaliyo laakiin tan iyo bogagga kuwanu waa qaali u badan tahay in aad rabto in aad ku siin shot a. Aad doonaysid in aad raacdo tallaabooyinka la mid ah sida dayactirka god.
Bilow tolidda up kama tollayn ah, hubi inaad wax yar ka baxsan halkaas oo kala ah istaago tagaan. Ka dib markii in la sameeyaa aad u socotaan si ay u daboosho wax ka go'da. Markaas ka gudbaan farahaaga oo u soo jeesan kabuufi ku saabsan haddii slide ku haya hawada ka dibna naftaada siin taabasho ah oo ku saabsan dib u.
4. kabuufi A haleysan yahay ama Broken: Haddii unit kabuufi way xun yihiin haddii aad leedahay waayo-aragnimo la dayactiro baabuurta korontada ka dibna aad dhab ahaantii waa in lagu badalo. Waxaad ka iibsan kartaa Dami bedelka on Arbacada ah, waayo, meel kasta oo ka $ 50 - $ 200 oo ku xiran tahay nooca iyo xaaladda. Waxaad u baahan doontaa inaad u dhigma xajmiga kabuufi iyo xoog ay mid ka mid ah aad leedahay, waayo, waxa ay si sax ah u shaqeeyaan.
Banzai Falls ma waa kii kaliya ee bogagga biyo la buufin ay jiraan noocyada kale sida Qarax Zone iyo Bounceland oo in my opinion bixiyaan wax soo saarka tayo sare leh. Banzai u muuqataa in ay dhibaato badan la cimri dherer taas oo horseedaysa dad aad u badan oo raadinaya tilmaamaha ku saabsan sida iyaga. Waxaan rajaynayaa in aad awoodaan si ay u cusboonaysiiyaan aad slide laakiin haddii aan hubi qaar ka mid ah noocyada kale.
Sida loo dayactir ah Slide Water buufin: The Dhibaatooyinka Afar Most Common Related Video: